Pregabalin vovoka mba hitondrana ny aretina sy ny tebiteby | AASraw vovoka
/Blog/Pregabalin/Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny pregabalin
Posted on 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 nanoratra tao Pregabalin.
1.Inona ny atao hoe Pregabalin?
Pregabalin Ny (148553-50-8) dia zava-mahadomelina izay amidy amin'ny ankamaroan'ny marika Lyrica amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia fanafody anti-epileptika izay antsoina koa hoe anticonvulsant. Ny zava-mahadomelina dia ampiasaina hampihenana ny tsiranoka ao amin'ny ati-doha izay mitarika fikolokoloana. Etsy ankilany, Pregabalin dia misy fiantraikany amin'ny akora simika ao amin'ny ati-doha izay mandefa famantarana fanaintainana manerana ny rafi-pitabatabana amin'ny vatana. Ny zava-mahadomelina dia ampiasaina ihany koa amin'ny tontolon'ny fitsaboana hitsaboana fanaintainana samihafa ateraky ny aretina isan-karazany toy ny fanaintainan'ny hozatra vokatry ny fibromyalgia, diabeta, ary koa ny fanaintainan'ny ratra amin'ny hazondamosina.
Pregabalin misy kapoaka, famotsorana lava, na takelaka lava ary koa amin'ny vahaolana am-bava (ranoka). Ny endrika Pregabalin rehetra dia miasa amin'ny fomba mitovy, ary ny dokotera no olona tsara indrindra hisafidy ny mety ho anao miankina amin'ny toetranao na izay tianao ho tratrarin'ny faran'ny tsingerin'ny dosage. Ny fananana fanafody am-bava dia fanafody fanaintainana tsara indrindra ho an'ny marary marobe izay tsy mifanaraka amin'ny tsindrona matetika. Ny zava-mahadomelina ihany koa dia mety hitarika voka-boa ratsy sasany rehefa overdosed na diso tafahoatra. Hamarino tsara fa manaraka ny torolàlana fatra amin'ny valiny tsara ianao.
Pregabalin (148553-50-8) dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa hanampiana ny fitsaboana ny aretim-piterahana amin'ny ankizy efa-taona farafahakeliny sy olon-dehibe koa. Nandritra ny taona maro izao, ny zava-mahadomelina dia nilalao andraikitra lehibe teo amin'ny tontolon'ny fitsaboana, ka nahatonga azy io ho iray amin'ireo fanafody manala fanaintainana mafy indrindra eny an-tsena. Ny zava-mahadomelina dia tsy tokony hoentina eo ambanin'ny dokotera raha tsy misy vokatra tsara kokoa. Na izany aza, alao antoka foana fa azonao ny Pregabalin amin'ny mpivarotra na mpanamboatra azo antoka manodidina anao.
2.Fihetsiky ny pregabalin
Pregabalin dia isan'ny kilasy fanafody anticonvulsant. Matetika ny fanafody ao amin'ity kilasy ity dia miasa toy izany ary ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny fepetra mitovy. Tsy mbola fantatra mazava hoe hatraiza ny fiasan'i Pregabalin, saingy azo inoana fa miasa amin'ny alàlan'ny fampitoniana ireo ratra simba ao amin'ny vatana izay mitondra any amin'ny fanafihana na fanaintainana. Ny fanafody dia mampihena ny fanaintainana ao amin'ny vatana vokatry ny antony na aretina maro samihafa. Miresaha amin'ny dokotera raha te hahalala bebe kokoa momba Pregabalin.
Tany Etazonia, Pregabalin dia efa nekena ho ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo aretina toy;
Post-herpetic neuralgia na fanaintainana mitranga aorian'ny tatatra
Ny fanaintainan'ny neuropathie diabeta ary
Ny fibromyalgia dia toe-pahasalamana izay misy fanaintainana marobe, toy ny ao amin'ny hozatra, taolam-bava mifangaro, na fihetsika avo dia mafy ary maharary mikasika azy. Amin'ny faritra hafa eran-tany, toa an'i Eropa, Pregabalin dia ampiasaina amin'ny fitsaboana fikorontanana amin'ny tebiteby, fepetra iray ampiasaina amin'ny fitsaboana any Etazonia any. Tahaka ny voalaza teo aloha dia ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa i Pregabalin ihany koa hanatsarana ny valiny. Ny dokotera koa dia afaka manisy fanafody ny marary amin'ny marary manana fepetra isan-karazany izay azo tsaboina na fehezin'ny Pregabalin.
Ny fatra an'ny pregabalin dia miankina amin'ny fepetra eo ambanin'ny fitsaboana. Na izany aza, ny fatra farany ambany dia 25mg, fa ny ambony indrindra dia 600mg isan'andro. Ny dokotera dia hametraka fatra mety ho anao aorian'ny fizahana ny toe-pahasalamanao. Indraindray ireo mpitsabo dia manoro hevitra anao hanomboka amin'ny fatra ambany, izay azo hanitsiana ny fotoana. Amin'ny tranga tsy mahazatra, ny dokotera dia afaka mampitombo ny dosage bebe kokoa. The Dosis pregabalin dia toy izao manaraka izao;
Dosis Neuropathy diabeta olon-dehibe
Ho famoahana eo no ho eo, ny dosage voalohany dia 50mgs izay tokony in-telo isan'andro. Ny fatra dia azo ampitomboin'ny dokotera anao amin'ny 100mg mba raisina in-telo isan'andro ao anatin'ny herinandro voalohany, izay ho voafaritra amin'ny fomba handraisan'ny vatanao ny fatra voalohany. Ny fizahana ara-pitsaboana dia fitsikerana ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fitsaboana. Amin'io fotoana io dia ny fatra Pregabalin dia azo atsangana amin'ny 300mg avo indrindra isan'andro, saingy tokony hatao amin'ny fotoana izany. Ireo hatrany am-boalohany dia manoro hevitra hatrany ny hanombohana ambany amin'ny fampihenana ambany ny fiatraikany.
Ny famoahana lava dia mitaky anao hisotro fatra voalohany 150mg fatra indray mandeha isan'andro, ary tokony homena ianao aorian'ny sakafo hariva. Ny dokotera dia afaka mampitombo ny fatra hatramin'ny farany ambony ny 330mg isan'andro. Ny fitomboan'ny dosage dia mety hitranga ihany rehefa avy nandinika ny fivoaranao sy ny fandeferana ny vatanao amin'ny Pregabalin ianao. Aza adino, aza amboary ny Pregabalin (148553-50-8) fatra tsy misy ny fitarihan'ny dokotera anao. Mety hitarika fiantraikany ratsy izany.
Ny andro hanaovanao ny fatra dia esory ny fatra amin'ny mahazatra maraina arak'izay voatondro ho anao amin'ny fanafody, dia atombohy ny fatra vaovao aorian'ny sakafo hariva. Ny fandalinana ara-pitsaboana dia nanambara fa ny fahazoana fatrany avo hatramin'ny 600mg isan'andro dia tsy hitondra tombony fanampiny. Noho izany, ianao dia tokony hifikitra amin'ny fatra natokana. Ny maka ny 300 ambony indrindra amin'ny 330gm isan'andro dia tsy tokony hanolorana azy ihany koa satria mety hitarika voka-droa miankina amin'ny fitsaboana.
Dingana olon-dehibe ao amin'ny postherpetic Neuralgia
Eto dia mizara ho sokajy roa ny famoahana ireo fanafody, famotsorana haingana, sy famoahana lava, ary samy hafa ny andiany roa. Ohatra, amin'ny famoahana eo no ho eo, ny fatra Pregabalin voalohany dia 150mg mankany 300mg isan'andro, izay mizara roa na telo ao anaty iray andro. Torak'izany, ny fatra dia azo ampitomboina amin'ny 300 isan'andro taorian'ny andro vitsivitsy miankina amin'ny ny fihetsiky ny vatanao amin'ny fatra voalohany. Raha manaitra ny valiny, dia tsy hanana antony hampitomboana izany ny dokotera. Ny fanafody dia mety mampidina kely kokoa ny fatra raha toa ianao ka mihinana fatra ambany ary mahatsapa fiantraikany ratsy.
Rehefa avy naka ny fatra 300mg mandritra ny roa na efatra herinandro eo, ary tsy ampy ny fanaintainana ny fanaintainana, dia afaka manapa-kevitra ny dokotera manapa-kevitra ny hampiakatra azy matetika amin'ny 600mgs isan'andro ho roa na intelo isan'andro. Tsarovy, ny 600mg isan'andro dia fatra lehibe indrindra natokana ho an'ny marary rehetra. Ny fivoahana an'ity ambaratonga ity dia mety hitarika voka-dratsin'ny lafiny pregabalin, izay ho sarotra na lafo hanova.
Ho an'ny famotsorana lava:
Eto, ny doka Pregabalin voalohany dia 165mg izay tokony horaisina indray mandeha isan'andro, ary atoro anao ny hitondra azy aorian'ny sakafo hariva. Misy ihany koa ny mety hampiakarana bebe kokoa ny fatrany ho 330mg ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny tsingerin'ny fatra. Aorian'ny fitsaboana roa na herinandro maromaro ary tsy misy fanatsarana lehibe ny fanaintainana dia afaka mampiakatra ny fatra hatramin'ny fatra 660mg isan'andro ny dokoteranao. Rehefa manova ny fatrany dia raiso ny maraina ho famotsorana eo noho eo avy eo atombohy ny fanafody aelim-panafahana aorian'ny fihinanana ny sakafo hariva.
Epilepsy fatra amin'ny olon-dehibe
Ho an'ny fitsaboana epilepsy, ny fatra voalohany am-bava dia 150mg isan'andro, izay mizara roa na telo. Tahaka ny fatran'ny fitsaboana hafa, dia afaka mampitombo ny fatra amin'ny 600mgs isan'andro ny dokotera ary tokony hizara roa na intelo isan'andro ihany koa. Eto dia ny 600mg ambony indrindra isan'andro.
Ny fahombiazana sy ny vokatr'ity fanafody ity dia miankina amin'ny fatran'ny zava-mahadomelina. Tsy nisy fanadihadiana nanaporofo ny maha-zava-dehibe ny fampifangaroana Pregabalin amin'ny gabapentin. Na izany aza, hanoro anao anao ny dokotera momba ny fanafody hampiasaina an'io fanafody io.
Fibromyalgia fatra lehibe
Eto ny fatra voalohany dia 75mg nalaina indroa isan'andro ary azo ahitsy ho 150mg in-droa isan'andro ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny fatra. Ny fatra dia azo ampitomboina bebe kokoa amin'ny 225mg ihany koa ho raisina in-droa isan'andro. Ny fatrany fibromyalgia farafaharatsiny dia 450mgs ary fatra fikojakojana tokony ho 300mg ka hatramin'ny 450mg. Etsy ankilany, asehon'ny fandinihana fa ny fandraisana 600mg isan'andro isan'andro dia tsy manome tombony fanampiny Pregabalin fa mety hiteraka voka-dratsy.
Pregabalin ho an'ny fanaintainan'ny neuropathic
Ny fatra voalohany dia 75mg isan'andro ary azo ampitomboina amin'ny 150mg isan'andro. Raha ny zava-misy, aorian'ny fatra roa na telo herinandro dia tsy misy fanatsarana lehibe, avy eo ny fitsaboana anao dia afaka manitsy azy ambony mankany 300mgs. Ny fatra amin'ny fikajiana ny fikajiana azy dia avy amin'ny 150 ka 600mg mizara isan'andro.
Ny Torolàlana Farany Ho an'ny Dihydroboldenone / DHB ho an'ny Bodybuilding
Ao amin'ny tontolo ara-pitsaboana dia hita fa i Pregabalin dia manome valiny kalitao sy manaitra be ho an'ny mpampiasa izay manaraka ny torolàlana amin'ny dosage. Hatramin'ny nanekena voalohany ny zava-mahadomelina tamin'ny 2004, dia marary an-tapitrisany no nandray soa tamin'ny Pregabalin indrindra tamin'ny fitantanana ny fanaintainan'ny fanaintainana vokatr'ireo aretina maro samihafa toy ny Epilepsy, Post-herpetic neuralgia na fanaintainana mitranga aorian'ny fanala, ny fanaintainan'ny neuropathie Diabetika ary Fibromyalgia. Miankina amin'ny fihetsiky ny vatanao miaraka amin'ny Pregabalin, afaka manantena ny hankafizana ilay vokatra ao anatin'ny fotoana fohy ianao.
Ny andro vitsivitsy voalohany amin'ny fatra dia manome ny dokoteranao ny vintana handinihana ny fandrosoanao alohan'ny hanapahanao hevitra raha hanitsy ny fatra ambany na ho ambony. Ny fandinihana dia mampiseho fa tokony hanantena valiny ianao ao anatin'ny andro vitsivitsy voalohany amin'ny fatra. Pregabalin dia zava-mahadomelina miasa haingana, ary noho izany dia tokony hanantena ianao fa hahamaivana ny fanaintainana ao anatin'ny andro vitsivitsy amin'ny fatra. Raha tsy mahatsapa fanatsarana ianao mandritra ny herinandro voalohany handraisana ny fatrao dia ampahafantaro ny dokotera mba hanamboarany ny doka mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Hafa ny vatan'olombelona, ​​ary tsy mandeha ho azy ny fahazoanao ny valiny haingana toy ny an'ny hafa. Miankina amin'ny toe-pahasalamanao ihany koa ny vokatr'izany. Ny sasany amin'ireo mahazatra Vokatra pregabalin ahitana;
Mampihena ny fanaintainan'ny osa
Pregabalin dia zava-mahadomelina mahery vaika rehefa manamaivana ny fanaintainana vokatry ny fahasimban'ny nerve toy ny neuropathy diabus peripheral, fanaintainana neuropathic voan'ny kemoterapi, na Fibromyalgia. Ny fandinihana samihafa dia mampiseho fa Pregabalin no fanafody mahomby indrindra amin'ny fampihenan'ny fanaintainan'ny neuropathika. Mijanona ho mandaitra ny sombin-javatra rehefa ampiasaina irery na na rehefa atambatra fanafody fitsaboana hafa.
Manatsara ny fiainana kalitao ho an'ireo marary manana Fibromyalgia
Araka ny voalaza teo aloha, ny Fibromyalgia dia toe-javatra iray izay iaretanao fanaintainana miely. Ny soritr'aretiny dia ahitana ny tsy fahampian-torimaso, ny havizanana, ny tebiteby, ny fahaketrahana, ny tonon-taolana ary ny hozatry ny hozatra. Manampy ireo marary ny fanaraha-maso ireo vokatr'aretina rehetra ireo.
Mampihena ny soritr'aretina Epileptika
Nankatoavin'ny FDA Pregabalin (148553-50-8) ho an'ny fitsaboana ny epilepsy. Ity zava-mahadomelina ity dia natokana ho an'ny marary manana epilepsy ampahany noho ny ratra amin'ny atidoha. Ampiasaina ihany koa izy io ho fitsaboana namboarina ho an'ny olona fa tsy nahomby ny fanafody anti-epileptika.
Fitsaboana ny tebiteby
Na dia tany Etazonia aza, Pregabalin dia tsy ampiasaina amin'ny hampihenana ny tebiteby, any Eropa, ny fanafody dia voaporofo fa vahaolana tsara indrindra. Pregabalin dia voalaza fa ampiasaina marika ho fanampiana amin'ny fitsaboana ny aretina mitebiteby any amin'ny faritra maro eran-tany. Misy ihany koa ny tranga tsy voatanisa rehefa hitan'ny dokoteranao fa ilaina ny manoratra Pregabalin ary mbola manome valiny kalitao. Na ny fanadihadiana ara-pitsaboana fohy na naharitra dia manaporofo fa ity fanafody ity dia afaka mahomby amin'ny fitsaboana antonony amin'ny antonony amin'ny fitsaboana antonony amin'ny antonony sy ny olon-dehibe.
Ny tsiambaratelo amin'ny vokatra Pregabalin kalitao dia ny fampidirana ny dokoteranao amin'ny fizotran'ny fatra. Aza manitsy ny doka Pregabalin raha tsy mampahafantatra ny fanafody. Raha azonao atao ny mividy fanafody mora amin'ny fivarotana an-tserasera isan-karazany, aza manomboka mihinana azy raha tsy mandeha fizaham-pahasalamana. Ity zava-mahadomelina ity dia natanjaka tamin'ny fanamaivanana ny fanaintainana nateraky ny antony maro samihafa. Ny atleta sasany dia mampiasa Pregabalin ihany koa mba hifehezana ny fanaintainan'ny hozatra, ary ny fanaintainan'ny ratra amin'ny hazondamosina, izay fahita matetika noho ny fampihetseham-batana sy ny fifaninanana.
6.Fiafaran'ny fiainana Pregabalin
Ity dia fanafody maimaim-poana miaraka amin'ny mavitrika Fiafaran'ny fiainana Pregabalin amin'ny ora 6. Noho izany, ho an'ny vokatra Pregabalin tsaratsara kokoa, dia tokony hizara roa na telo isan'andro ny fatra. Ny maha-zava-mahadomelina am-bava dia manamora ny fahazoanao valiny satria manana famongorana fohy fohy izany. Aza hadino hatrany ny mifikitra amin'ny toromarika nomen'ny dokotera anao. Na dia maka fatra farany ambany na ambony indrindra aza ianao, ny atsasaky ny zava-mahadomelina dia mitovitovy.
7.Vokatry ny pregabalin
Toy ny zava-mahadomelina hafa eny an-tsena ankehitriny, ny Pregabalin dia mety hampiharihary anao koa ny voka-dratsy ateraky ny fatra azy io. Ankamaroan'ny Vokatry ny pregabalin dia vokatry ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy na indraindray rehefa tsy mihetsika manoloana ny zava-mahadomelina ny rafi-batanao. Izany no antony tokony ilazana hatrany ny hanombohana miaraka amin'ny fatra ambany, izay azo amboarina amin'ny fanafody anao aorian'ny fanaraha-maso ny fomba fihetsiky ny vatanao ny fanafody. Ny sasany amin'ireo fiantraikany mahazatra amin'ny Pregabalin dia misy;
Tsemboka - mandritra ny fotoana mety hahatsapanao rendremana mandritra ny fisotroan'ity zava-mahadomelina ity, saingy tokony hanjavona rehefa avy kelikely.
Mandoa, mandoa ary aretin'andoha ihany koa ny voka-dratsy hafa mety hitranga ao anaty fanafody.
Mpampiasa Pregabalin maro no mimenomenona amin'ny fitomboan'ny fahazotoan-tena, izay mitarika ny fahazoana lanja.
Misy ihany koa ny tranga tsy fahampian'ny fifandrindran'ny hozatra, ny olana amin'ny fitenenana ary ny tsy fisian'ny fifandanjana amin'ny vatana.
Ireo fiantraikany rehetra ao Pregabalin dia nanjavona rehefa afaka fotoana kelikely, fa raha toa ka mijanona ela kokoa noho ny nantenaina izy dia tokony hampandre ny dokotera anao hanampy anao hahita vahaolana alohan'ny hiharatsy. Amin'ny lafiny iray, misy fiantraikany ratsy lehibe izay tokony hifandraisanao amin'ny fanafody avy hatrany dia manomboka miaina azy ireo ianao;
Olana ny fahitana, raha vao manomboka mahita fahitana indroa ianao, na fahitana vetaveta na misy fiovana eo imasonao dia aza misalasala, antsoy ny dokotera avy hatrany.
Ny fofona tarehy, ny vava, ny maso, ny tenda, ny lela, ny tenda, na ny loha dia tokony ho taterina avy hatrany.
Ny voka-dratsy hafa lehibe dia misy; leotona, fikorotanana, mamontsina ny kitrokely, tongotra ambany, tanana ary sandry na tratry ny tratrany.
Ny vaovao tsara dia azo fehezina ireo voka-dratsin'ny Pregabalin rehetra raha mampahafantatra ny dokoteranao ara-potoana ianao na dia hanjavona aza ny fepetra sasany rehefa mandeha ny fotoana rehefa mahatsapa ny vokatra farany voalaza etsy ambony ianao fa aza manohy mandray fatra raha tsy mampahafantatra ny fanafody. Ny dokoteranao dia afaka manapa-kevitra ny hampiato ny fatra raha tsy voafehy ny toe-javatra na manome sosokevitra iray hafa, fanafody azo antoka kokoa ho anao.
Izany dia zava-mahadomelina izay nanaporofo ny tenany ho isan'ireo fanafody anti-epileptika tena mahery amin'ny tsena ankehitriny. Nampiasaina izy io mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny neuropathie manerana an'izao tontolo izao, ary tany amin'ny faritra sasany toa an'i Eoropa dia nekena ho amin'ny fitsaboana ny tebiteby. Betsaka ny tombontsoa azonao raha tianao rehefa mandray an'io fanafody io. Tombony Pregabalin izay izao manaraka izao;
Manome valiny kalitao
Ny fandalinana ara-pitsaboana dia nanaporofo fa Pregabalin dia manome valiny kalitao amin'ireo mpampiasa azy izay manaraka ny torolàlana amin'ny dosage. Ho an'ireo mampiasa azy ho fanaintainan'ny neuropathic dia afaka mahatsapa fanatsarana na dia aorian'ny fandidiana ny fatrao voalohany. Tao anatin'ny herinandro voalohany, tokony hanomboka hahita traikefa feno ianao, ary manome tombony ny medika hanombatombana ny fizotran'ny fanafody. Na inona na inona antony hampiasana ny Pregabalin dia mampiavaka azy ny valiny.
Pregabalin dia tanterahina amin'ny alàlan'ny vava, ary noho izany, tsy misy tsindrona tafiditra ao. Noho izany, dia fanafody tsara indrindra ho an'ny mpampiasa izay tsy mahazo aina amin'ny tsindrona tsy tapaka. Tsy mila miahiahy momba ny fanaintainanao ianao, ary afaka miaraka mora foana amin'ny zava-mahadomelina miaraka aminao amin'ny fanafody hafa, raha toa ka mampandre ny dokotera anao ianao.
Manana tapany hainandro fohy io
Raha oharina amin'ny fanafody am-bava hafa, i Pregabalin dia manana fiainana maharitra ao amin'ny rafitry ny vatanao, izay manome antoka anao vokatra tsara sy tsara kalitao. Miankina amin'ny toe-javatra izay itondranao an'io zava-mahadomelina io dia mila maka ny fatranao mandritra ny roa na telo intelo isan'andro ianao ary indraindray indray mandeha isan'andro amin'ny sakafo hariva.
Afaka mora ianao Buy Pregabalin powder am-pitoviana na ampy ho an'ny tsingerinao amin'ny dosage avy amin'ny fivarotana an-tserasera samihafa na amin'ny fivarotam-panafody akaiky indrindra satria ara-dalàna amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Ny dokotera koa no ho olona mety hampiseho aminao ny toerana hividianana azy. Izany dia manamora ny fividianana sy fampiasana ny zava-mahadomelina tsy misy tahotra amin'ny fifanolanana amin'ny lalàna.
Pregabalin dia manala anao amin'ny fiantraikany ratsy kokoa raha ampitahaina amin'ny anticonvulsant hafa. Hahatsapa fiantraikany mahazatra toy ny aretin'andoha, mandoa, miaraka amin'ny hafa mandritra ny andro voalohany amin'ny fatra, ka hanjavona ihany ianao. Amin'ny lafiny iray, raha ampahafantarinao ny mpitsabo anao mialoha dia mora ny fifehezana ireo vokatra mivoatra. Na izany aza, ho an'ny traikefa tsaratsara kokoa, ho azo antoka fa tsy mampiasa na manao fanitsiana dosage ianao raha tsy hampandrenesanao ny mpitsabo anao.
Raha mijery ny fanamarihana isan-karazany Pregabalin, dia mazava fa mpampiasa maro no afa-po amin'ny valiny azony aorian'ny fihinanana zava-mahadomelina. Pregabalin dia ampiasaina matetika ho toy ny fanafody manala fanaintainana, ary nahazo valiny tsara avy amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa izy. Ny mpikaroka ara-pitsaboana dia nametraka fikarohana hafa ihany koa, ary izany no antony naneken'ny FDA azy io hampiasaina amin'ny fitsaboana Epilepsy, neuralgia aorian'ny herpetika na fanaintainana mitranga aorian'ny fihintsanan'ny alikaola, fanaintainan'ny neuropathie diabeta ary Fibromyalgia.
Amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao toa any Eropa, Pregabalin dia nekena ho fitsaboana ny fitaintainan'ny olon-dehibe. Na izany aza, misy ihany koa ireo tranga vitsivitsy voalaza fa nisy mpampiasa sasany no nanana traikefa ratsy indrindra amin'ny zava-mahadomelina. Hafa ny fihetsiky ny zava-mahadomelina amin'ny vatan'olombelona, ​​ary tsy mandeha ho azy fa miasa ho anao fotsiny izy, satria nanampy ny namanao. Ny tranga hafa vokatry ny fiantraikany ratsy dia nateraky ny fihoaram-pefy sy fampiasana diso an'i Pregabalin.
Raha fintinina, ity dia zava-mahadomelina be dia be rehefa ampiasaina amin'ny fomba mety sy noho ny antony tsara. Nanampy olona an-tapitrisany maro nijaly aretina isan-karazany izy io, araka ny asongadina etsy ambony. Toy ny fanafody fanafody hafa, tsy tokony handray Pregabalin ianao raha tsy atolotry ny dokotera anao. Raha sendra misy voka-dratsy ianao dia ampahafantaro ny dokotera avy hatrany anao mba hanampy anao handresy azy ireo.
Miova izao tontolo izao, ary anio dia azonao atao mividy Pregabalin an-tserasera amin'ny tranokalanay amin'ny vidiny mirary. Ny tranonkalantsika dia sariaka ho an'ny mpampiasa, manamora anao ny fanodinam-bokatra amin'ny vokatra iray mankany amin'ny iray hafa ary koa handamina ny baiko ao anatin'ny segondra vitsy. Azonao atao ny miditra amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny finday avo lenta, tablette, na koa ny laptop-nao. Ambonin'izany dia manao fanaterana eran'izao tontolo izao sy ao anatin'ny fotoana fohy indrindra izahay. Azonao atao ny mividy Pregabalin amin'ny ankapobeny na ampy fotsiny ho an'ny tsingerinao.
Izahay no mpamatsy Pregabalin lehibe ao amin'io faritra io, ary ny vidinay mora dia tsy manimba ny kalitaon'ny vokatray. Manolotra karazana vokatra ara-pahasalamana isan-karazany amin'ny magazay an-tserasera izahay. Na izany aza, manome hevitra hatrany ny mpanjifanay rehetra izahay mba hahazoana antoka fa manaraka fizaham-pahasalamana izy ireo alohan'ny hanombohany mandray ny vokatray. Ny vokatra ara-pitsaboana ataonay dia mety hiteraka voka-dratsy rehefa tsy ampiasaina amin'ny fomba diso na diso tafahoatra. Pregabalin amidy azo alaina ao amin'ny fivarotam-panafody akaiky anao fa ho azo antoka fa hahazo izany avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Tsy ny tranombarotra ara-pitsaboana an-tserasera na ara-batana daholo no manolotra vokatra kalitao.
11.Pregabalin hitsaboana ny fanaintainan'ny osa sy ny tebiteby
Nandritra ny taona maro izao, i Pregabalin dia tena nilaina indrindra teo amin'ny tontolo ara-pitsaboana bebe kokoa, tamin'ny fitsaboana ny fanaintainan'ny fanaintainana, izay fantatra amin'ny hoe fanaintainan'ny neuropathika. Ny fanafody dia miasa amin'ny alàlan'ny fifehezana ny simika amin'ny ati-doha izay mandefa famantarana amin'ny nerveo, izay mampihena ny haavon'ny fanaintainan'ny vatanao. Tany Etazonia Etazonia FDA dia nankasitraka ny Pregabalin ho fitsaboana ny aretim-po nateraky ny aretina maro samihafa toy ny Epilepsy, Fibromyalgia, neuralgia Post-herpetic na fanaintainana mitranga aorian'ny fanaintainana sy fanaintainan'ny neuropathie Diabetika.
Na izany aza, Pregabalin (148553-50-8) dia tsy nankatoavina amin'ny fitsaboana ny fitaintainanana any Etazonia, na dia misy aza ny tatitra milaza fa misy mpampiasa sasany mampiasa azy io tsy voafehy mba hifehezana ny aretina. Any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao toy ny any Eropa dia nekena tamin'ny fitsaboana ny tebiteby amin'ny olon-dehibe i Pregabalin. Misy ihany koa ny tatitra tsy voamarina fa Pregabalin dia azo ampiasaina hifehezana ny fahaketrahana. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Pregabalin, mifandraisa amin'ny dokoteranao na manatona amin'ny farmasinao.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Ny toetra mampiavaka ny klinika sy ny fanafody dia ampiasaina amin'ireo marary fibromyalgia amitriptyline, duloxetine, gabapentin, na pregabalin. Fikarakarana aretin-tratra sy fikarohana, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin sy pregabalinina amin'ny fanaintainana - mihamitombo ny famaritana voalaza antony iray mahatonga ny ahiahy ?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Ny fahombiazan'ny Pregabalin amin'ny fanaintainana aorian'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny sokajy fandidiana samihafa: meta-analysis. fitsaboana, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin ho an'ny fitsaboana aretin-tebiteby ankapobeny: fanavaozana. Aretina sy fitsaboana amin'ny neuropsychiatric, 9, 883.
Primo (Methénolone Acetate) iray amin'ny vehivavy manana steroid anabolic safidy ho an'ny vehivavy
Afaka mahazo ny Primobolan (metenolone acetate) ve ny vehivavy?
Ny Primobolan no fampiasana steroid anabolika amin'ny ankapobeny amin'ny famoahana tsingerin'ny steroid
Ahoana no fiasan'ny Orlistat ho toy ny fatiantoka lanja? Ny "loharanon'ny fahatanorana": NAD + & NMN ho fanampiana